The Perfect Cheap Off Road Electric Self ny mampifandanja ny Scooter - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Ny isan-karazany dia iray amin'ireo fifidianana manan-danja ny fiheverana kosa electrically Powered fiara. Self ny mampifandanja ny scooterfa ambany-fiara haingam-pandeha, entam-barotra mitovy amin'ny rehetra mitovy. Mivoatra ny Koowheel, ny Hoverboard K7 dia patented ho toy ny "roa-kodia, tena mahay mampifandanja fiara manokana.". Na ianao na tsy coasting, fifaninanana, na commuting, Hoverboard K7 foana amin'ny fahamarinan-toerana. Ny Hoverboard K7 Self-mampifandanja ny Scooter 8.5inch hoverboard kodiarana lehibe eny lalana, ka dia afaka ihany koa ny milalao azy io koa ny miakatra sy midina lalana. Model iray hafa K5 ROA kodia tena mahay mampifandanja lafiny roa Scooter amin'ny Bluetooth sy marani-tsaina nitondra jiro. Ny fahasamihafana iray fa hahita eo Segway sy vitsivitsy tena mahay mampifandanja birao dia ny tsy fisian'ny handlebars, koa, 50% lanja lafiny tsirairay mba hitandrina izany fifandanjana eo anoloan'ny fiara indray amin'ny Ary rehefa afaka indray eny, ary milamina kokoa, mora kokoa sy azo antoka hanitsaka, indrindra fa ho an'ny beginners. Eto amin'ny Koowheel, dia ho hitanao iray amin'ireo tsara indrindra momba ny tena evaluations-mahay mampifandanja môtô.
Ny Koowheel Hoverboard dia iray teo anivon 'ny tonga lafatra "Vita avy any Shina" tena mahay mampifandanja môtô. Izany dia midika hoe Tombanana fa tokony scooter ity farany ianao, fara fahakeliny, 10 taona, izay midika hoe anao, dia mahazo antoka indrindra amin'ny vola isaky ny misafidy izany tena mahay mampifandanja môtô. New roa kodia tena mahay mampifandanja scooter herinaratra . Izany scooter koa dia manasongadina ny lafiny rafitra stabilization tsy matetika teo ihany ny samy hafa môtô. Ankoatra izany, toa ny scooter dia manana sehatra roa eo kodia izay manintona ny lehibe ao amin'ny fitarihana ny sasany môtô. Ny 2 Wheel ny mampifandanja ny Scooter 's jiro mamirapiratra, ary ianao ho afaka hihazakazaka amin'ny milina io mora foana ihany koa. Ny bateria ela velona aina amin'ny fitenenana Bluetooth Double rafitra tonga lafatra mitondra miaraka amin'ny alina ny fotoana dia toa mahafinaritra ny manana zo diany, LED jiro mamirapiratra eny an-dalana, mihaino mozika sy manana ny traikefa hifandanja tsara. Ankoatra izany, misy tahony eo afovoany, ka tena mora kokoa ny hitondra.
Ity karazana tena mahay mampifandanja scooter , tsy toy ny olon-kafa, dia nanana hery misintona 8pcs Sela Mpandray Hafanana, fa tsy ny mahazatra 4pcs silicone Gros, mora mahatsapa kokoa sy mafy orina, ambany ny tahan'ny tsininy. Izahay dia efa mampihatra ny patanty, ary izany tsy fandikan-dalàna amin'ny Chic, solowheel na Hareza, ny teknolojia sy ny samy hafa tanteraka amin 'ny patanty. Raha toa ianao ka maitso-tanana, hifidy ny 'mpanao voalohany' ambaratonga. Ny kodiarana dia maharitra sy andraikitra mavesatra, ary afaka ireo maintsy hiatrehana izay mety ho lalana. Kodiarana ihany koa ny manampy ny mpitaingina mba haka aina ny tonga lafatra raha mitaingina. Mahafinaritra-tsoavaly dia raha mbola mora ny ambany.
Post fotoana: Oct-05-2017